Ragga Way isku Dilaan Gabdhaha uu jirkoodu leeyahay Astaamahan oo naaskana ku leh calaamadaan - Hablaha Media Network
Ragga Way isku Dilaan Gabdhaha uu jirkoodu leeyahay Astaamahan oo naaskana ku leh calaamadaan
HMN:- Inkastoo uu jiro kala duwaanaasho dhanka shaqsiyada ah iyo afkaaraha hadana waxaa jira sifooyin ninku uu aad u jecel yahay in haweeneyda uu ka helo, Hadaba Qodobka Arimaha Bulshada ee Shabakada Hablaha.com Ayaan Ku Soo Bandhigaynaa Sir Gaar u ah Haweenka Hadii Ay sameeyaana Ay Ku Hanaan Karaan Raga Dooqooda ah .
1-Midda Wax Fahmeysa : isku day mar waliba in ninkaada faahnto iyo ficilada ninkaada si caqliyeysan u aragto , hana ku weerarin ficil waliba oo ka dhaca.
2-Midda Runta Iyo Daacadnimada Badan : u ahaaw mid daacad ah riun badan , xitaa erayada yar yar been ha uga sheegin ninkaada.
3-Midda Dhiira Gilinta Badan : ma jiro qof aan u baahyneyn dhiira gilin si arimaha hor yaal ugu dhiirado hadaba ha iloowin in ninkaada mar waliba dhiira giliso .
4-Midda Daryeelka Badan Oo Xanaanada leh : ninka mar warliba waxa uu baahan yahay daryeel iyo xanaano si waliba ay d`diisu tahay ee gabrayaheey si wacan u daryeel ninkaada.
5-Qosolka Macaan gaaw dabeecad ahaan ninka waa cunug weyn waa uuna u bahaan yahay ka qoslinta , ee gabar yaheey caqliga badan ha iloowin in aad ku farxad giliso qoslkaada sixirka ah.
6-Midda Bisil Hadalka Wax Ku Oolkana Leh : ninka waa ay soo jiidata haweeneyda bisil taasi oo awood fikradeed siiineysa in ay hadalka la qeybsato oo arimaha kala xaajoon karta .
7-Gabadha Leh Muuqaalkeeda Dabiiciga Ah : muuqaalka banaanka waa meelaha ugu daran ee ninka soo jiidata , waxa uuna ninka ka helaa gabadha leh muuqalkeeda dabiicgha ee waxaad ka fogaataa in aadan ku dheeraan isku qurxinta Makeup-ka taasi oo dhab ahaan daboolaya muuqaalkaadii dabiiciga ahaa dhumisa.
8- Midda Isku Kalsoon: inkastoo haweeneyda ku qurxoon tahay in ninkeeda kula hor muuqato mid daciif ah hadana ninka waa uu jecel yahay haweeneyda xoogan iskuna kalsoon , taasi oo awood u leh in arimaheeda iyada dabirato